Google inobvisa kuchengetedzwa kubva kuGoogle Drive uye hofisi yayo suite | IPhone nhau
Kana zvasvika pakuva nemagwaro edu akachengetedzwa, zvisinei nekwatinoachengeta, tinogona kushandisa password, iyo inodzivirira kuzara kuzere kana inongotadzisa kugadziriswa kwayo. Google hofisi suite yabvisa sarudzo iyo zvakatibvumidza kuvharidzira kupinda kwemagwaro atakachengeta muGoogle Drive, zvese izvo zvakagadzirwa kuburikidza neGoogle hofisi suite senge Zvinyorwa, Spreadsheets uye mharidzo, zvichiratidza kuti tishandise dziviriro inopihwa neiyo iPhone, Kubata ID kana Face ID kuchengetedza kupinda kwadzo.
Huwandu hukuru hwevashandisi vaenda kumaforamu echigadzirwa cheGoogle kunogunun'una nezve izvi zvakakosha kubviswa kuchengetedza kuchengetedzeka kwemagwaro avo mushanduro dzinowanikwa muApp Store ye iPhone ne iPad. Panguva ino, nzira chete yekuti magwaro edu achengetedzwe ndeye kuvhara musangano pese patinorega kuzvishandisa uye zviri pachena kuti hatibvumire kuti password irangarirwe.
Sezvinotarisirwa, Google haina kupindura kune chero chikumbiro chakaitwa nevashandisi. Chikonzero chete Google inogona kunge yabvisa iyi sarudzo ndeyekuti haina kutsigirwa neFiles app, iyo nyowani faira maneja iyo yauya kubva muruoko rweIOS 11 uye neyatinogona kuwana kune yekuchengetedza masevhisi Dropbox, Google Drive, OneDrive, Mega ...
Kubatanidzwa kweFiles app hakugone kuvhura gwaro kana iri password yakachengetedzwa. Izvo zvinoitika neDropbox, asi zvirinani nguva ino, meseji inoratidzwa ichitizivisa kuti mafaera haakwanise kushandiswa nekuti akachengetedzwa ne password.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google inobvisa dziviriro kubva kuGoogle Drive uye hofisi yayo suite
Aya ndiwo mashandisiro anoita kumeso muMifananidzo anoshanda